mvura - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'mvura'
kucha naya hako asi...
Mamiriro ekunze: Ve met department vanoti gore rino mvura iriko yakanaka asi kukohwa kuchava kushoma nokuti zvirimwa zvichashaya anosakura nenyaya yeWHATSAPP
mvura munda whatsapp goho kurima kunaya
mvura bhawa mota
Kariba yakazo zara here
Ko paya painetsa magetsi zvainzi Kariba Dam mvura hakuna?
Ko apa magetsi haachanetsa wani saka kureva kuti rakazara?
Mubvunzo wangu ndewekuti dam iri rakazadzwa nezuva here?
mvura zesa magetsi heat wave 2015 kariba dam
Ma problems ese disappear - mvura, magetsi, salary
zvinhu zvava kuto dissapear mu Zimbabwe
1. rains dissapear
2. magetsi dissapear
3. mvura dissapear
4. salaries dissapear
5. mabasa dissapear
Imi moimba Hepi hepi?
mvura zimbabwe magetsi ma problem ese disappear winky d
mvura chando zinwa kugeza
mvura kumusha makuhwa chibhorani
Mukomana avharirwa nemvura ari kwe bhebhi
Pane muface akaenda kumba kwebabie kudinner. Vapedza kudya, mvura yakatanga kunaya heavy zvikanzi namomz webabie chingorara pano idzo dzikabvuma.
Momz vakaenda kunogeza maplates, babie rabva ranowaridza bed, dzimuface dzikasara mudining.
Momz nebabie pavakadzoka vakaona musina munhu, vakatsvaga vakamushaya. Vakazoona munhu achipinda akatota zvekupenga, babie dobva rabvunza kuti wanga uripi zvikanzi:
"Ndanga ndamboenda kumba kunoudza mama vangu kuti handichakwanisi kuuya kuzorara kumba nenyaya yemvura"
mvura mukomana musikana
mvura baba cyclone dineo ma floods 2017
mvura bocha kugeza chando cha 2017
mvura chando munamato kugeza chando cha 2017
mvura chando chiremba kugeza sipo tauro
chikurubhi - riot 2015